Obbo Takilawald Axnaafuu hooggansa Oromoo CBE diigaa jira! – Kichuu
“Hoggantoota Oromoo Baankii daldala Itiyoophiyaa keessaa ari’uuf dura taa’aan Boordii baankii daldala Itiyoophiyaa Obbo Takilawald Axnaafuu shira guddaa xaxaa jira. Keessattuu hooggantoota Oromoo baankichaa hooggansa murteessaa irra jiran ariitan malee jechuun dhaadachaa jira. Hooggantoota baankii biyyoolessaa (Dr. Yinaagar Dasee) waliin ta’uun Pireezidaantii baankichaa obbo Abbee Saanoo irraan dhiibbaa guddaa geessisaa jiru. Namoota nuti barbaanne malee muuduu hindandeessuu jechuudhaan hojiisaa danqaa jiru.
Keessattuu, bakkeewwan murteessoo kanneen akka Humna namaa, Tajaajila Liqii fi Biizinaasii hooggansa Oromoo irraa kaasaattii Amaaraan bakka buusaa jechaa jiru. Kun ammo hojmaata fi seera baankii kan cabsedha. Muudama pireezidant Abbee Saanoo dhiheefatanis, boordii baankichaa deeggaruun, baankiin biyyooleessaas fudhachuu dideera.
Muudama baankichaa kan dhiheefattu pireezidaantiidha. Boordiin ammo waan pireezidaantiin dhiheefatte ni mirkaneessa. Sana booda baankiin biyyoolessaa muudamicha mirkaneessa. Boordiin baankii daldala Itiyoophiyaa adeemsa kana faallessuun, muudama nuuf dhiheessuun dura muudamtoota irratti baankii biyyoolessaa waliin mari’adhaa jechaa jira.
Kana kan raawwattu ammo boordii baankichaa Obbo Takilawalidha. Kaayyoonsaa hooggansa Oromoo baankicha keessaa dhabamsiisuudha.
Gama biraatiin ammo, Daayirektara distiriiktii Adaamaa hanna olaanaan himatamuun hojiirraa ari’aman Obbo Biruuk (Sabaan Amaaraa ta’an) haalduree tokko malee gara hojiitti deebi’ee akka muudamuuf obbo Takilawald kallatii kaa’eera.
Sababa kanaan Obbo Aabbeen aangoo isaanii fedha isaaniitiin gad-lakkisuuf xalayaa galfataniiru jedhamaa jira. Hojmaata badaa akkanaa dura dhaabbachuun gahee Oromoota maraatti.Yeroon isaas amma.
Kumaa Gaadisaa -Hin Jarjaraa- New Oromo Music 2020. Official Video. Of-Ta’i Film Production.
Hoolaa Dhaggeeffadha!kanatu biyya Bulcha.... Maali jedhi Jeneeraal Biraanuu_Julaa waa’ee WBO’n Wallagaa paarlaamaa Itoophiyaatti Gowwaa kun?
Bara baraan wayita guyyaan kun (Ebla 15) geesse Oromoon bakka jiruu 'Baga Guyyaa Goototaa Geenye' waliin jedha.